स्वास्थ्य-शिक्षा | Matrisandesh | Page 4
महोत्तरी । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले अब शिक्षा संकायको पढाइ रोक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले शिक्षकको उत्पादन अधिक मात्रामा भएको भन्दै अब प्राविधिक शिक्षामै जोड दिनुपर्ने बताए…
काठमाडौँ । दशैँमा खानपानमा ध्यान नदिँदा विभिन्न समस्याहरु देखिन सक्छ । दशैँमा कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ, यसका बारेमा केही टिप्सहरु यस्ता छन ।
१. दशैँमा खानेकुरामा ध्यान नदिँदा फुड…
एजेन्सी । यौनसुख सबैले समान रुपमा भोग गरिरहेका हुँदैनन् । कतिपयको यौन जीवन दुखदायी हुन्छ, कसैको रोमाञ्चक । कसैले यसबाट चरम सन्तुष्ट प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्, कसैले असन्तुष्ट ।
यौनसँग सम्बन्धित धेरै…
काठमाडौं,१७ भदौ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु आफूहरुसँग कुनै छलफलनै नगरी आन्दोलनमा उत्रिएकोमा दुःखेसो पोखेका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री…
दुबै मृगौला पीडित राजवंशीलाई जापानबाट आर्थिक सहयोग
टोकियो,१४ भदौ । नेपालका पूर्व राष्ट्रीय फ़ुटबल खेलाडी राजिनाथ राजबंशीको जिवन रक्षाका लागी आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ ।
जापानबाट पुर्बेली विकास सहकार्य केन्द्रले आर्थिक सहयोग गरेको हो ।…
जापान सरकारलाई नेपालमा लगानी गर्न गृहमन्त्री थापाको आग्रह
काठमाडौं,७ भदौ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले जापान सरकारलाई नेपालमा लगानीगर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल सरकार सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन तयार रहेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले नेपालका लागि जापानका राजदूत…
काठमाडौं,२९ साउन । नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यवधि ऐन संसोधन गर्न माग गरेको छ । नयाँ प्रावधानहरु समेटेर बनाइएको ऐनले डाक्टरहरुलाई अपराधीको दर्जामा…
काठमाडौं,२६ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न गठन गरिने स्वास्थ्य शिक्षा अनुगमन संयन्त्रको नेतृत्व गर्न डा गोविन्द केसीसमक्ष प्रस्ताव गरेका छ ।
काठमाडौँ,१७ साउन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परिक्षाफल प्रकाशित भएको छ । बोर्डले पहिलोपटक ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार १२ कक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको हो ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार…
काठमाडौं,१५ साउन । शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एकेडेमिक सर्टिफिकेट) धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने लगभग निश्चित भएको छ । यसका लागि अर्थ…
मकवानपुर,११ साउन । प्रदेश नं ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले आफुँले प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमा प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ ।
विहिवार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन…
काठमाडौं,११ साउन । आज आषाढ शुक्ल पूर्णिमा, अर्थात् गुरु पूर्णिमा आफूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने गुरूप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा मनाइँदै छ ।
वैदिक धर्मग्रन्थ महाभारतका रचयिता वेद व्यासको जन्मजयन्तीकाअवसरमा…
सरकार र डा.केसीबीच ७ बँदे सहमति,२७औं दिनमा अनसन तोड्दै
काठमाडौं,१० साउन । अनसनरत डा.गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता निश्कर्षमा पुगेको छ । सरकारी र केसी पक्षको वार्ताटोलीबीच भएको थियो ।
बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहरबारमा भएको सरकारी…
संघीय शिक्षा विधेयक आगामी कात्तिकसम्म आउने : मन्त्री पोखरेल
काठमाडौ,७ साउन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले असार मसान्त भित्रमा संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
मन्त्री बनेको एक महिनापछि…
काठमाडौ’७ साउन । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै विगत २४ दिनदेखि अनसनमा बस्नुभएका डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले…
एनआरएनए जापानको महासचिव पदमा जनक बिक्रम शाहीले उम्मेद्धारी दिने